Basola inhlangano ngokuqasha abokufika - Ilanga News
Home Izindaba Basola inhlangano ngokuqasha abokufika
Basola inhlangano ngokuqasha abokufika
lSafda ithi abakuleli ngamavila, kabayifuni imisebenzi enzima
UDKT Siyabonga Madlala ongusihlalo weSafda uthi impela bakhona abantu bangaphandle abasebenza emapulazini ngoba abakuleli kabafuni ukwenza
SIKHULU isililo empha-kathini wezigodi ezahlu-kene zaseMelmoth ngaphansi kwe-Emakha-saneni Community Trust eyabuyiselwa umhlaba, asola inhlangano engayenzi inzuzo, iSouth African Farmers’ Development Assosiation (Safda) – ebambe amapulazi awo – ‘ngokuwuxosha’ iqashe abantu bokufika, yize bethi kwakunezivumelwano ezithi uzoqhubeka usebenze.
Amalungu omphakathi okuthiwa abesebenza epulazini iMagma-ri (Mahambehlala) naseMgqomo, athi kuwona sekuqashwe abantu baseSwazini nabaseMozambique.
Kusolwa iSafda ngokuthi yenze lokhu ngoba ifuna ukukhona u-R3 ngehora, hhayi u-R21.69 ovumelekile. Amanye amalungu ayingxenye yabantu ababuyiselwa umhlaba onala mapulazi – akhala nango-kungahanjiswa kahle kwezinto okuthiwa zenzelwa emakhoneni.
Athi kwamihlangano kayihlali ukuze achazeleke ngokusebenza kwemali nokuthi la mapulazi ayenza kanjani.
ILANGA lihambele eMelmoth ngoLwesihlanu lapho kunemipha-kathi eyabuyelwa ngamapulazi awu-6 atshale umoba, amahlathi namakinati. Lithole ukuthi amane asingethwe ngamalungu omphaka-thi ngokubambisana nababenga-banikazi phambilini ngenhloso yokuthi bawafundise umsebenzi.
Leli phephandaba lithole ukuthi ababengabanikazi bala mapu-lazi kabazange baphikisane nohulumeni ngesikhathi kufakwa izicelo zokubuyiselwa kubantu kwalo mhlaba akhiwe kuwona.
Ngokwesivumelwano okuthiwa saphasiswa ngo-2018, i-Emakhasa-neni Community Trust inamasheya awu-60% kula mapulazi kuthi ababengabanikazi phambilini babe no-40%.
Emuva kokuphasiswa kwalesi sivumelwano, kunamanye amapu-lazi amabili abuyela kulo mphaka-thi, okuthiwa abe esenganyelwa yiSafda emuva kwesivumelwano okuthiwa senziwe ngamalungu athile, ayesebhodini lalesi sikhwama, amanye aphikisana nalokho ethi kungaba kuhle ukuba nawo angene kulawa amane, anganye-lwe yisikhwama esisodwa.
Isiyonke imindeni ehlomulayo ngokubuyiselwa kwalo mhlaba iwu-99.
“Indlela iSafda esebenza ngayo, iyasimangalisa nje ngoba konke ekwenzayo kayiphumeli obala. Ngisho amapulazi kawekho esimeni esigculisayo, nokuthi kwasekuqaleni kasiqondanga ukuthi ingenelela nje izolekelela ngani ngoba phela sasivele singenayo inkinga ngokuthi la mapulazi angene ngaphansi kwalesi sivume-lwano esivele sikhona ngoba kuwona, yonke into yenzelwa ekukhanyeni.
“Imihlangano iyabakhona, siyazi ukuthi ipulazi lenza malini noku-thi uma kunenzuzo ihlukaniswa kanjani. Ngasohlangothini lweSafda, kaseneme ngoba sizwa ngayo seyisitshela ukuthi inzuzo ingakanani, kungacaci ukuthi kufikwe kanjani lapho,” kusho elinye ilu-ngu lomphakathi elicele ukuba igama lalo ligodlwe.
Lithe kula mapulazi kuphithizela abantu okungebona abendawo, kanti akufanele ngabe kusebenza abangaphandle ngoba inhloso enkulu wukuthi umphakathi obu-yiselwe umhlaba ukwazi ukuziba-mbela.
“Uma ukhala ngamaholo, utshe-lwa ukuthi shiya phansi, bakhona abantu abazothatha leyo mali abanikwa yona. Kukhona abakhala ngokuthi bake bakhokhelwe u-R100 noma u-R150 ngesonto, uma bekhononda kuthiwe maba-yodla umoba uma bengawufuni umsebenzi,” kusho leli lungu.
ILANGA lithole ukuthi kwabhodi ye-Emakhasaneni yagcina ihlukana phakathi ngenxa yokuthi amanye amlungu avumela ukuba
Lokhu kwadala ukuba amanye amalungu ebhodini asule. UDkt Siyabonga Madlala oyi-CEO kwaSafda, uthe konke lokhu okushiwo ngamalungu omphakathi kungamampunge, wathi kuna-babengabanikazi bamapulazi abangafuni ukuwadlulisela ezandleni zabamnyama.
“Inkinga enkulu wukuthi thina njengoba sikhona nje, sibalekelela ekutheni umhlaba ubuyele kubona okwangempela, kungalokhu kudlalwa ngabo.
“Kuliqiniso elingephikwe ukuthi abantu bakithi kabafuni ukusebenza noma ukwenza imisebenzi enzima, okuyikhona okwenza siqashe abantu bangaphandle ukuba basebenze emapulazini.
“Bakhona abantu esibaqashile okungebona balapha ngoba abase-Ningizimu Afrika kabafuni ukwe-nza imisebenzi enzima. Kuyaziwa nje ukuthi ukuhlahla umoba kabakufuni,” kusho uDkt Madlala.
Uthi abantu basendaweni ababaqashile ngabane-ziqu ezithile, kodwa uma kuhlahlwa umoba, baqasha abakwezinye izindawo.
“Okunye-ke kangikwazi, nalezo zikhalo bezingakafiki kithina. Inkinga abantu basafuna ukulawulwa ngabanikazi bamapu-lazi laba abangafuni ukunikezela ngomsebenzi kubona ngoba kwalawa amanye amapulazi, nabo kabazi ukuthi kwenzekani kuwona,” esho.
U-Adv Bheki Mbili wekhomishini yokubuyiswa komhlaba KwaZulu-Natal, uthe ngesikhathi kwenziwa izivumelwano, imipha-kathi eyabuyiselwa umhlaba yani-kwa ithuba lokuzikhethela ukuthi ifuna ukusebenzisana nobani, owe-Emakhasaneni Community Trust wakhetha ukusebenzisana neSafda.
“Umnyango nekhomishini kababe besangena-ke ekwenziwe-ni kwalezo zivumelwano, kodwa okudingeka ukuthi kwenzeke wukuthi bona babuyele kusona isivumelwano sabo uma kukhona okungasenzeki kahle, bese beya-xoxa. Uma lokhu kubehlula, sebengakwenza ngokusebenzisa abameli,” kusho u-Adv Mbili.
Previous articleIngwadla emndenini wesisulu sikamalugaju
Next articleKusolwa iGcokama ngokuphazamisa umcimbi